Eco Haweeney Page
circuit Tababarka Fat Gubidda
tababarka circuit waa wanaagsan oo noo oggolaan in si loo kordhiyo polish jirkaaga, oo leh waqti iyo meel awoodaha xadidan.
Sidee si ay u noolaadaan dhimashada ninkeeda?
Luminta aad cabsi jecel.
photos in style guridda
Ma rabtaa inaad wax cusub oo aan caadi ahayn -.
Ckrab wajiga guriga
daahirintiisa Maqaarka waa mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan ee daryeelka qofka.
ultrasound hore ee uurka
ultrasound ugu horeeyay ee uur - waa fursad cajiib ah si ay u arkaan in ay ilmaha ka hor waxaa la dhashay, laakiin sidoo kale mid ka mid ah habka cudurka ugu muhiimsan inta ay uurka leedahay oo keliya ma aha.
Kor u qaadidda lacag iyo nasiib
"farxad ma aha in lacag, iyo iibsadaan" - ku hadlaysaan hadal caan u sabab ah Marilyn Monroe, oo runtii waa hanad ah, ku alla kii ay aheyd mid run sheegay.
Boorsooyinka Fashion - Spring-Summer 2014
Ma fog xilli diiran marka nooca jirto iyo indhaha prettier.